Mektoub : aleo maty toy izay hilelaka ny FAT. – MyDago.com aime Madagascar
Samy niresaka ilay ravin-taratasy nataon’I Dr Salomao avokoa ny kabary teto an-kianjan’I Magro Behoririka .Indro entinay aminao ny tatitra tamin’izany
Mektoub : aleo maty toy izay hilelaka ny FAT hoy izy. Ny mpitarika koa tsy mila mitanisa ny zavatra vitany fa aoka ny vitany no hitsara. Tsy mety ny olona iray no sady “executif” no “legislative” toa an-dRatsirahoanana izay sady CST no “conseiller special”. Fady amin’ny tany repoblikana izany.
Ny Sadc dia “institution” fa i Salomao dia olona ary mbola tsy nilaza ny Sadc fa iny no izy ka aza manaiky rebirebena fa Ravalomanana tsy maintsy hody ao anatin’ny fotoana fohy, isika kosa dia aoka hitandro ny filaminantsika sy ny firaisakina hatrany fa sao dia izao farany izao vao rava ny nofy.
Ignace : mbola tsy nisy nilaza azy ho mpitondra nefa milaza fa tsy mila fankatoavana iraisam-pirenena. Aleo tokoa ve fifidianana toy izay fankatoavana iraisam-pirenena ?
Iny taratasin’i Salomao iny indray dia “simple pure folie”. Raha “mail” iny maninona ny daty 17 nefa 21 vao tonga sa teknolojia mampiomehy ? Efa nisy nanova indray iny taratasy iny.
Manoela : ny « retour sans condition » ihany. Ny prezida ao amin’ny Sadc ihany no manapaka ary efa fantatra fa naman-dry Simao iny ary teny frantsay no nanoratany nefa Sadc, dontandroka iny. Tsy ampy saina ary adalan-tsaina ny FAT.
Edouard : “Mivaralila ny ao Mozambika, teneno izay teneninareo fa izahay mahazaka demokrasia, tokana ihany ny anay mody Ravalo sy Radidy, io no fantatray.”
Mamitiana : ny filoha ao anatin’ny Sadc no efa niteny fa miverina dia miverina. Rehefa fanjakana ambony fanjakana dia mpanongam-panjakana.
Tsianiha : tsy ekena ny resaka ankoatra ny tapaka tany Sandton.
Guy Maxime : kely sisa dia miala amin’ny toerana i Rajoelina. Manakorontana fotsiny iny taratasin’i Salomao iny ary tsy maintsy misakana ny fiverenan’ireo filoha indrindra Ravalomanana satria tsy hitondra soa ho azy mihitsy ka ny vahaolana tokana dia manafaingana ny fialan’i Andry ihany ary isika manohana ny ara-dalana no maro an’isa. Marina ilay” mandat d’amener” satria mitsoaka i Alain Ramoroson.
Henri : mifandray ny irak’i Ban Ki Moon sy ilay” mandat d’amener”.” Simple letter” ve dia hanova fanapahan-kevitry ny filoha 14 ?
Auteur Solo Razafy*Publié le 23 juin 2011 23 juin 2011 Catégories Politique
5 réflexions sur « Mektoub : aleo maty toy izay hilelaka ny FAT. »
TOKONY HOE TSY MIOVA IZAY VOALAZA E
23 juin 2011 à 8 h 10 min
23 juin 2011 à 9 h 19 min
sao de kary ry paoly fa tsy saka?io na inona na inona mitranga de misy farany foana ny ratsy atao e!na lazainao andraso eo i paoly aza,de mbola andrasanay foana,fa ny marina anie tsy mba maty e,ary matoa mbola misy ny tolona de mbola tsy ao ny fahafahana,na ny demokrasia ihany koa.
Aza ny hagegenareo no ahilika aty fa rehefa lany bala dia miala! tsy nisy nifidy
anareo teo ary mbola tsy nisy nankatoa anareo ka mahanana ambo miandry ny
safidimbahoaka raha olona MANANTSAINA fa saingy indrisy fa vorona azon’adala ka dia mihariary
hitan’izao tontolo izao ny fahavoazan’ny sainareo sy ny maha ambany dia ambany azy.
Koa tsy lazaina fa efa fankatoavana iraisampirenena indray io dia mba misy HIKAKAKAKANAY
Ary aza mamindra DEVOLy aty aminay aty ry paoly a!ny anao koa moa bizina ka tsy omena tsiny!!
Dia hoe ho fanamafisana ilay lainga marivo tototra ve!!!!kapila efa nandeha o!!!!!inona indray no fika
manaraka??????Dadanay tsy maintsy miverina!!!!!!
Précédent Article précédent : Les petits jeux de petites déclarations ne suffisent pas pour stopper le processus vars la sortie de crise
Suivant Article suivant : Dokotera SIMAO Leonardo